ကလိုစေးထူး: စပ်မိစပ်ရာ (၈) …
Jun 25, 2007, 9:07:00 PM
ဒီပန်းချီကားလေးကို ပိုကြိုက်တယ် အရောင်လေးတွေစိုနေတာပဲ၊ ဒေါ်လာ ၄၆၀၀တောင်မှ ဟုတ်လား ဈေးကြီးတယ်နော် အဲဒီိလိုပန်းချီကားမျိုးဆွဲတတ်ချင် လိုက်တာ၊ များများမဆွဲပါဘူး တစ်လတစ်ကားပဲဆွဲမှာ၊ ပြီးရင်တစ်လတစ်ကားပုံမှန်လေး ကိုကလိုစေးထူးဆီကိုပို့ထားပြီး ရောင်းရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ရန်ကုန်မှာဇိမ်လေးနဲ့နှပ်နေရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်၊ အလကားရတဲ့ စိတ်ကူးကို အားရပါးရယဉ်ကြည့်တာလေ၊ မိုက်တယ်နော်၊ ဟီးဟီး ဘယ်လိုလဲကူညီနိုင်ပါမလား၊ ကော်မရှင်ပေးပါမယ်ဗျ၊ ပန်းချီသင်တန်းအရင်တက်လိုက်အုံးမယ်၊ ပြီးရင်ဆက်သွယ်မယ်နော်
Jun 25, 2007, 9:12:00 PM
ခုမှပဲ ကျွန်တော်လည်း မက္ကဆီကန် နွေရာသီပွဲတော်က အထွက်လက်မှတ်ရတော့တယ်။ ဗဟုသုတ ရပါတယ်ဗျာ. တက်ဆင်ကြီးက ချမ်းသားလိုက်တာ.. ဒီလိုလူတွေရှိနေကြတယ်. ဒီလိုလူတွေကိုလက်ခံတဲ့ အင်္ဂလန်ကိုလည်း မုန်းတယ်။ တော်ပြီ ဗိုလ်လိုမပြောတော့ဘူး။ ဆန္ဖပြတယ်
Jun 26, 2007, 1:58:00 AM
စာတွေကို စိတ်တိုင်းမကျရင်ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေပုံရတယ်။ စာလေးတွေက ကောင်းပါတယ်ဗျ။ တစ်ကောင်တောင်ကြော်စားလိုက်ပြီ။ :P
Jun 26, 2007, 2:19:00 AM
အဲဒီကို တကူးတက ပြန်သွားပေးတာ ကျေးဇူး..
ဒါမဲ့ အဲဒီပန်းချီကားလေး ဟိုနေ့က တွေ့လိုက်ရတာပဲ
Jun 26, 2007, 6:35:00 AM
တယ်ရင်းတွေ ကိုတကယ်ခင်တယ် ဆိုရင် ပန်းချီကားလေးတစ်ကားလောက် ၀ယ်ပို့လိုက်ပါလားအေ့။
Jun 26, 2007, 8:17:00 AM
it is really good article. there is alot good information for readers. addtional u point out current situation of National convention.
Jun 26, 2007, 11:41:00 AM
ချစ်လေပြေ…၊ ၄၆၀၀ တန် ကားက အရင်ပို့စ်က ကားပါ။ အခုကားက ၃၅၀၀ တဲ့။ မင်းမင်း…၊ အဲဒါ အရင်းရှင်နိုင်ငံလေကွာ။ :) ချိုကိုပြောတာ မှန်လိုက်တာ...၊ ဒီပို့စ်က ကိုယ်တိုင်ကိုက (အချက်အလက်နည်းတယ်ထင်လို့) သိပ်စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်နေတာ။ :) ဆရာမ မေငြိမ်း…၊ ကျနော် အဲဒီကားကို ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်။ အစစ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဓာတ်ပုံ။ :D ဒိုရာ…၊ ငါးဒေါ်လာတန် ခဲခြစ် ပန်းချီကားတွေယူမလား။ :P နဂျိန်းရေ၊ ရှားရှားပါးပါး ရေးပေးတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးသယ်ရင်း။
Jun 26, 2007, 5:46:00 PM
အကြံအဖန် အလှည့်အပတ်လေးတွေနဲ့ ငွေပေါ်အောင်လုပ်တာက - ဂွင်
ဂွင် ဖြစ်အောင် ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်တာက - ဂွင်ဆင် (ဒါမှမဟုတ်) ဂွင်ရိုက်
ဂွင်ရိုက် တာကို အတိုကောက်ပြောတော့ - ရိုက်
အဲဒီလို ဂွင်လိုက်ရိုက်နေတာကတော့ - ရိုက်စား
ရိုက်စားလို့ရတာကတော့ - အားလုံးသိတဲ့ ဖား ပေါ့ဗျ။
Jun 26, 2007, 8:30:00 PM